တိုးတက်သော အပြောင်းအလဲတွေအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံသည်လူမျိုးစုကွဲပြားမှုများသလို စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းကြောင်းတို့နှင့်ပြည့်နက်နေသည်။ လူဦးရေ သန်း ၆၀ ခန့်ရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်းအကြီးဆုံးနိုင်ငံများထဲတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ယခင်က Burma ဟု အမည်တွင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သော်လည်း စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့် ၁၉၆၂မှစ၍ နိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ အလေ့အထများ ဆိတ်သုဉ်းသွားခဲ့သည်။ ထိုကတည်းက စ၍ ၂၀၁၀အထိ် မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀နီးပါးကြာအောင် စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်သို့ကျရောက်ခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၀တွင် ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့အသွင်ကူးပြောင်းမှုစတင်လာခဲ့ပြီး တောက်ပသော အနာဂတ်ဆီသို့မျှော်မှန်းလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀တွင် ပထမဆုံးသော ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ အများယုံကြည်ရသည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပ နိုင်ခဲ့ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က လွှတ်တော်တွင်း ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းကို အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ တပ်မတော်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ လွှတ်တော်တွင်း ကိုယ်စားလှယ်နေရာ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆက်လက်ယူထားဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လွှတ်တော်သည် နှစ်ပေါင်း၅၀ အတွင်း ယခင်ကထက်ပို၍ ဒီမိုရေစီနည်းကျ တရားဝင်မှု ပိုအားကောင်းလာခဲ့သလို နိုင်ငံသည်လည်း စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ဆီသို့ ဦးတည်ကြိုးပမ်းလာနေသည် ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်း(FNF) သည် ကမ္ဘာ့တစ်လွှား လစ်ဘရယ်အယူအဆနှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ် တိုးတက် ထွန်းကား ရေးအတွက် တက်ကြွစွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လည်း စီးပွားရေး လွတ်လပ်မှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနှင့်လစ်ဘရယ်အယူအဆသဘောတရားများ တိုးတက်ထွန်းကားရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ကူညီပံ့ပိုးပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်၌ ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းရုံးခွဲကိုစတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်မှုနှင့် တာဝန်ယူမှု တို့သည် ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်ဟု ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းက ခိုင်မာစွာယုံကြည်သည်။
ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းကဆောင်ရွက်နေသော ကူညီပံ့ပိုးမှုပုံစံအများစုမှာ မူဝါဒရေးဆွဲရေးအတွက် လိုအပ်သော သုတေသနအချက်အလက်များပေးခြင်း၊ စာအုပ်စာတမ်းများထုတ်ဝေခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများ နှင့် သင်တန်းပေးခြင်းများဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပေးမှုနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ် ငန်းဝန်းကျင် တစ်ခုပေါ်ထွန်းရေးကိုအားပေးရန် FNF သည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ(Seminars)၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ(Concept Papers)၊ ပညာရှင် ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် လေ့လာရေးခရီးစေလွှတ်မှုများ စီစဉ်ပေးကာ ၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိ ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်များနှင့်ညှိနှိုင်းကာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် နယ်ပယ်အလိုက်သင့်တော်မည့်သင်တန်းများစီစဉ်ကျင်းပ၍ ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်နှင့်ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှု များ ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးကို ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။
ဖောင်ဒေးရှင်းသည် စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီနည်းကျလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောဝန်းကျင်ကို ကူညီဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးနိုင်စေရန်အလို့ငှာ အထူးသဖြင့် ဝေးလံသီခေါင်သောဒေသများတွင် ဒေသခံမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းကာ မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးနှင့်နိုင်ငံသားပညာပေးသင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ များကိုလည်း စီစဉ်ကျင်းပပေးလျက်ရှိသည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏၀န်ထမ်းများကျွနု်ပ်တို့ဘာတွေလုပ်နေသလဲစာအုပ်များဆင်းမ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအကယ်ဒမီ International Academy for Leadership (IAF)သတင်း/ဆောင်းပါးHumans of Yangon (မြန်မာ)လွတ်လပ်မှု အဆိုအမိန့်များEnglish Version
ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဒီမိုကရေစီအကြောင်းအရာများကို ဦးစားပေးတင်ဆက်မည့် ခေတ်မြင်ကွင်းဟု အမည်ရသည့် ပထမဆုံးသော podcast စီးရီးကို Mohinga Matters အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းကာ FNF Myanmar မှ အောက်တိုဘာလတွင် မိတ်ဆက်...
Falling Walls Lab Myanmar ၂၀၂၀ တွင် “Breaking the Wall of the Skills Gap between Universities and the Employment Sector for STEM Graduates” ခေါင်းစဉ် အနိုင်ရရှိ ရန်ကုန်၊စက်တင်ဘာ ၂၆ ၂၀၂၀။ ။ Falling...
We are Friedrich Naumann Foundation Myanmar.
အမှတ် (၃၅)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းနှင့် မင်းဓမ္မလမ်းထောင့်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။